अन्ततः माधव नेपालसामु झुके केपी ओली, फकाउनलाई यतिसम्म गरे ! – " सुलभ खबर "
अन्ततः माधव नेपालसामु झुके केपी ओली, फकाउनलाई यतिसम्म गरे !
काठमाडौं – सम्बन्ध नराम्ररी बिग्रिएको ८२ दिनपछि कम्युनिस्ट प्रधानमन्त्री एवं नेकपा अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र पार्टी वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपालबीच चार घण्टा लामो एक्लाएक्लै छलफल भएको छ ।
ओली र नेपालबीच मंगलवार प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास बालुवाटारमा पार्टी सञ्चालनसहित समसामयिक राजनीतिक परिस्थिति र भारतसँगको सीमाविवादमा केन्द्रित रहेर चार घन्टा लामो छलफल भएको हो ।
भेटवार्तामा उनीहरूले तिक्त सम्बन्धको समीक्षा गर्दै कमीकमजोरी दोहोरिन नदिने र संवाद बाक्लो बनाउने सहमतिसमेत गरेका छन् । यसअघि केपी ओलीले माधव नेपालमाथि व्यंग्य गरेपछि सम्बन्ध बिग्रिएको थियो ।
भदौ ५ गते बालुवाटारमा भएको सचिवालय बैठकमा ओली–नेपालबीच चर्काचर्की परेको थियो । सिंगापुरमा उपचारका लागि जानुअघि डाकिएको बैठकमा नेपालले दिएको स्वास्थ्यलाभको शुभकामना ओलीले अस्वीकार गरेपछि भनाभन समेत भएको थियो । ओलीले आफ्नो स्वास्थ्यविरुद्ध अफवाह फैलाएको आरोप नेपालमाथि लगाएका थिए । आजको नयाँ पत्रिका दैनिकमा समाचार छ ।
अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’, नेता बामदेव गौतम र नारायणकाजी श्रेष्ठले हस्तक्षेप गरेर दुई नेतालाई थम्थमाएका थिए । त्यसयता ओली–नेपाल सचिवालय र सर्वदलीय बैठकहरूमा आमने–सामने भए पनि सामान्य बोलचाल समेत बन्द थियो । ओली र प्रचण्डले नेपाललाई समेत छलफलमा राख्दै आएकोमा पछिल्लोपटक सचिवालय बैठकमा उनको असहमतिका बाबजुद प्रदेश प्रमुखहरूको निर्णय भएको थियो । प्रदेश प्रमुखको निर्णयमा नेपालले बैठकमै असहमति जनाएका थिए ।
ओली–नेपाल सम्बन्ध चिसिएपछि दुबै समूहका कतिपय नेताहरू चिन्तित थिए । प्रधानमन्त्री ओलीनिकट प्रदेश ५ सरकारका मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलले दुवै नेताले संवादमार्फत विश्वासिलो वातावरण तयार गर्नुपर्नेमा जोड दिँदै आएका थिए । दशैंअघि नै प्रधानमन्त्री ओली संवादमार्फत सम्बन्ध सुधारमा तयार रहेको भन्दै जनसम्पर्क सल्लाहकार अच्युत मैनालीले नेपालसँग सम्पर्क गरेका थिए । पछिल्लोपटक प्रधानमन्त्री ओलीको आग्रहमा समीक्षात्मक संवादपछि सम्बन्ध सुधार भएको नेताहरू बताउँछन् ।
‘नेताहरूबीचको एकता, सहकार्य र उच्चस्तरीय समझदारीबाटै पार्टी एकता प्रक्रिया सम्पन्न भएर यहाँसम्म आइपुगेको हो,’ केन्द्रीय सदस्य तथा विदेश विभागका उपप्रमुख विष्णु रिजालले छलफलमा भएको समझदारी उदृत गर्दै भने, ‘उहाँहरूले सबै एक भएर जनताले दिएको म्यान्डेट पूरा गर्न सरकार र पार्टीलाई अघि बढाउन एकता अपरिहार्य भएको छलफलबाट निष्कर्ष निकाल्नुभएको छ ।’
ओली–नेपाल दुवैले पछिल्लो तिक्त सम्बन्धमा केन्द्रित रहेर समीक्षात्मक छलफल गरेको उच्च स्रोतले जनाएको छ । नेपालले आफूले नोट अफ डिसेन्ट राख्दै आउनुको कारण प्रस्ट्याएका थिए । ओलीले भने कतिपय दोस्रो तहका नेताहरूको गलत रिपोर्टिङका कारण पनि एकता प्रक्रियाका सन्दर्भमा कमजोरी भएको हुन सक्ने भन्दै आइन्दा त्यस्तो नहुने जवाफ दिएका थिए ।
भेटमा प्रधानमन्त्री ओलीले पार्टी कार्यालय भवन निर्माणको नेतृत्व लिन नेपाललाई प्रस्ताव गरेका छन् । साबिक एमाले केन्द्रीय कार्यालय मदननगर बल्खुमै नयाँ भवन बनाउने नेकपाको तयारी रहेको छ ।
धुम्बाराहीस्थित पासाङल्हामु प्रतिष्ठानको कार्यालयमा मासिक भाडामा नेकपाले केन्द्रीय कार्यालय सञ्चालन गर्दै आएको छ । साविक माओवादी केन्द्रीय कार्यालय पेरिसडाँडामा भने नेकपाले केन्द्रीय विभाग र जनवर्गीय संगठनहरूको कार्यालय राखेको छ ।
एक्लाएक्लै भेटर्वार्ताका लागि प्रधानमन्त्री ओलीले दुईपटक आग्रह गरेपछि मात्रै नेता नेपाल छलफलका लागि बालुवाटार गएका हुन् । कात्तिक २४ गते सांगठनिक एकीकरणका बाँकी काम टुंग्याउन ओली र प्रचण्डले छलफल गरेका थिए । त्यसलगत्तै ओलीले छुट्टै छलफलका लागि बालुवाटार आउन आग्रह गरेपनि नेता नेपाल गएका थिएनन् ।
केन्द्रीय आयोग र निकायमध्ये पूर्व एमालेले तीन र पूर्व माओवादी समूहले दुई लिने समझदारी भइसकेको र मापदण्डअनुसार साविक नेतृत्वलाई नै निरन्तरता दिने सहमति भइसकेकाले थप छलफल आवश्यक नरहेको नेपालले जवाफ दिएका थिए ।
मंसिर २५ गते बसेको बैठकले आयोग र निकायको एकीकरण टुंगो लगाएको भोलिपल्ट पुनः छलफलका लागि प्रधानमन्त्री ओलीले बोलाएपछि नेपाल मंगलबार लामो छलफलका लागि बालुवाटार पुगेको स्रोतको दाबी छ ।